Falanqeynta Kulanka Liverpool Vs Wolves kooxda Liverpool oo kasoo kabsaneysa bar-bardhicii ugu danbeeyay
Home Horyaalka Ingiriiska Falanqeynta Kulanka Liverpool Vs Wolves kooxda Liverpool oo kasoo kabsaneysa bar-bardhicii ugu...
Kooxda Liverpool ayaa marti galin doonta kooxda Wolves kulan ka tirsan todobaadkii 11-aad ee horyaalka premier League kulan ka dhici doona Anfield.
Reds ayaa kulanka soo galaysa iyaga oo doonaya in ay ku soo laabtaan wadada guulaha kadib bar-barihii ay la galeen Brighton todobaadkii hore.
Dhanka kale Wolves ayaa kulanka soo galaya iyaga oo guul muhiim ah ka gaadhay Arsenal todobaadkii hore waliba doonaya inay sii wadaan guulaha.
Kulanka: Liverpool Vs Wolves
Tartanka: Premier League.
Liverpool ayaa badisay 7-dii kulan ee ugu dambeeyay ee ay la ciyaartay kooxda Wolves horyaalka Premier league Iyaga oo dhaliyay 15/2.
Isaga oo wajahaya kooxdiisii ​​hore ee Wolves, xiddiga Liverpool ee Diogo Jota ayaa noqon kara ciyaartoygii afraad ee gool ka dhaliya shantiisii ​​kulan ee ugu horaysay Premier League ee garoonkiisa kadib Alan Shearer iyo Les Ferdinand oo Newcastle United u dhaliyay iyo Jermain Defoe oo u dhaliyay Portsmouth.
Wolves ayaa 2-0 uga badisay kooxda difaacaneysa horyaalka ee Manchester City xilli ciyaareedkii hore. Waxay hadda noqon karaan kooxdii seddexaad ee guul ka gaarta kooxda hanatay horyaalka laba xilli ciyaareed oo xidhiidh ah kadib markii ay sameeyeen kooxaha Liverpool (2000/01 iyo 2001/02) iyo Spurs (2016/17 iyo 2017/18).
Xiddiga Pedro Neto ayaa dhaliyay seddex gool 10 kulan oo uu saftay kooxda Wolves xilli ciyaareedkaan waana in ka badan intii uu dhaliay 29-kii kulan ee xilli ciyaareedkii hore.
Previous articleFalanqeynta Kulanka Tottenham vs Arsenal xili kooxda Tottenham ay hogaanka dooneyso
Next articleInter Milan oo dooneysa inay heshiis cusub u gacan geliso Romelu Lukaku xili lala xiriirinayo Real Madrid.